Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. अबिरल बर्षाका कारण तराईका जिल्लाहरु डुवानमा, पहिरो खस्दा राजमार्गहरु अवरुद्ध – Emountain TV
अबिरल बर्षाका कारण तराईका जिल्लाहरु डुवानमा, पहिरो खस्दा राजमार्गहरु अवरुद्ध
काठमाडौं, २७ असार । बिहीबारदेखिको अविरल वर्षाले काठमाण्डौ उपत्यका सहित देशैभरको जनजीवन प्रभाबित भएको छ ।
बर्षा पछि आएको बाढीले तराइका बिभिन्न जिल्ला डुवानमा परेका छन भने पहिरो जाँदा बिभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन । रौतहटमा बाढीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध बन्न पुगेको छ भने लाल बकैया नदीले बन्जरहाको बाँध कटान गर्दा आधा दर्जन बस्ती डुवानमा परेका छन् ।
त्यसैगरी बाढीले मोरङका बिभिन्न स्थान डुवानमा परेका छन् । शुक्रवार रंगेलीमा देउरिया खोलाले बगाउदा एक युवक बेपत्ता भएका छन् । पहिरोले रामेछापको सदरमुकाम जोड्ने खुर्काेट मन्थली सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ । बिपी राजमार्ग अन्तरगत खनियाँखर्कको सोलभञ्ज्याङमा पहिरो खस्दा सवारी आवागमन बन्द भएको छ । ओखलढंगाको मानेभञ्ज्याङमा बाढीले सडक छेकिएपछि सयौ यात्री अलपत्र परेका जनाइएको छ । त्यसैगरी अकिरल बर्षाका कारण धनकुटाको हिले भोजपुर सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ ।